Mumbia ee Young diyaar u duudduubay - Jasa Pembuatan Website Murah Dan Berkualitas
Home » »Unlabelled » Mumbia ee Young diyaar u duudduubay
Mumbia ee Young diyaar u duudduubay
Alhamdulillah ku dhowaad saddex todobaad ka dib tuujiyay, ubax leeyihiin badan oo aan midho magaalada Mumbia ee socda. Xalada tan fogaadey cayayaanka muhiim ah oo ka midho mar sameeyo duubaya. Waxaa loo isticmaali karaa si duub size caag 1.5 kg iyo 2 kg. Waxqabadka waxaa loo noqday cunsur muhiim ah oo guul daraba noqon kartaa kaamilka ku dhafeen, midho ah, hilibka macaan iyo qaro weyn, in maqnaanshaha cayayaanka. Baako la sameeyaa markii ubax ayaa bilaabay inay ka muuqdaan jira (bilaabi midho sameynta). Sameynta udug on midho ku dhafeen, waa in aanay noqon mid aad u ballaaran, qiyaastii ballac ee magaalada Mumbia ee suulka iyo weli cagaaran. Haddii in ka badan in ama qaybta midho waa ka dibna casaan, sida xaqiiqada ah ay goori goor tahay, aka fly midhaha la kulmin ka nixin, si ay midho waa qudhmi doonaan oo dhacdaan. Si loo soo saaro midhaha ugu badnaan, wax kasta badnaan laamaha midho of 4 (afar) oo gogo '. Haddii in ka badan afar, kabka ma aha midhaha ugu fiican. Waxaa intaa dheer, caag ah caag isticmaalo waa 2 kg size ugu badan ee duubaya midho 4 (afar) abuurka.
Ka dib markii magaalada Mumbia ee ku duudduuban oo keliya sugto 1.5 ilaa 2 todobaad in la goostay. Dheeraadka ah magaalada Mumbia ee rummaanka waxaa ubax oo wakhtiga beergooyska noqon kartaa joogto ah ugu yaraan muddo saddex bilood ah si joogto ah. Taas macnaheedu waxa weeye in marka lowska ah ee hadda jira waa diyaar u goynta, dhafeen sii wadi doonaa inuu soo baxo, si ay hawlaha u qeexay iyo goosashada magaalada Mumbia ee sii socoto.
Sidaas dambe ma ay sugin, yuuk qurxin beerahayaga la dhafeen, rummaanka. Dhadhanka macaan, oo raaxaysan natiijada.
Sida ay Beeraha xogta Department Demak, beerista ku dhafeen, biyo ugu weyn ee tiro ka mid ah tuulo oo ku yaalla 14 degmo ee Demak. Sanadkii 2012, cadadka ku dhafeen, biyo warshad 126 606 geedaha, halka sanadkii 2011-badan sida sida 123,000 geedaha.
Bil kasta, magaalada Mumbia ee soo saartaa celcelis ahaan 500 qaybo ama miisaankiisu yahay 50 kiilo. Haddii qiimaha ee magaalada Mumbia ee ugu sareeya RP 13,000 halkii kiilo, bishiiba dakhli la kasbaday ee RP 650,000. Marka dhafeen, qiimaha ugu hooseeya ee RP 5,000 halkii kilo ahaa, Mumbia siin kartaa dakhli ah RP 250,000 bil kasta.
Subadi (40), beeralay Sidomulyo Village, Degmada Wonosolam, ayaa qirtay magaalada Mumbia ee dhaqaalaha qoysaska dakhligoodu kor u kacay. Waxaa intaa sii dheer in ay dakhliga laga helo iibka ee qalalan goosashada hadhuudhka, waxa uu helay dakhliga ka soo iibinta biyo ku dhafeen, saddexdii biloodba mar mar.
"Waxaan haystaa 90 geedaha ku dhafeen, in ay yihiin wax soo saarka yar ee dayrka ama duurka. Goosashada kasta oo saddexdii biloodba mar, ku dhafeen, jiirka celcelis helay sida ugu badan 5,400 pounds. Haddii qiimaha kacay tufaax yaraan RP 6,000 halkii kiilo, dakhliga aan si RP 32.4 million. "Siciid Subadi.
Mumbia ee ma aha oo kaliya ka faa'iideysan beeralayda, laakiin sidoo kale bulshada Demak ku soo biiraan xilliga beeraha la goostoba kaashuuga ee February-April. "Shaqada ee qaybta kaashuuga luamayan dakhli ku filan ah. Dakhliga shaqada ee Lab of RP 35,000 per nus-maalin, halka dumarka RP 22,000 per nus-maalin, "ayuu yiri Guddoomiyaha Hortikaljar Cluster Demak Sukarno.
Kala duwan ku dhafeen, waxa lagu beeraa Demak rummaan dhafeen iyo image. Rummaan ku dhafeen, waa dhafeen hooyo horumarsan ee Demak. Ka Timid geed waalidka Krapyak Village, Village Bintoro.
Mumbia ee loo magacaabay guduud Demakyang inay meel aqoonsiga ee degmada waa bilowga ah ee calaamada u ah diinta Islaamka in ay fuliyeen Songo Wali ah. "Red" waa midabka aasaasiga ah ee ku dhafeen, iyo "rummaan" waxaa loola jeedaa Kandel Imane marang Ilaah (Faith adage ee Ilaah).
Noocyo magaalada Mumbia ee la soo heer qaran loo aqoonsanyahay sida Demak ah magaalada Mumbia ee kala oo ka sarreeya. Waxaa loola jeedaa qadaridda Wasiirka Beeraha Maya 512 of 2005 ku sii daayo ee magaalada Mumbia ee biyaha Red rummaanka sida kala duwan oo ka sarreeya.
Waxaa intaas dheer in dayrka, kaashuuga waa kaymo Dalalkii wajahdo iyo beeraha sida intercrops. Laga bilaabo 2000, oo sidoo kale loo sameeyey nidaam ku dayasho leh u aasaan intercropping kaashuuga. Waxaa jira saddex hab intercropping ayaa codsatay, beerista ama beero kuwaas oo kaashuuga iyo bariis. Caucasians ama ku dhafeen, warshad agagaarka balliyada yaqaabo, iyo lowska beeray halka tanduwati ama maamul kale oo ganacsi isku dhafan, sida Spai lo'da, carro iyo noolaha.
Beerista ku dhafeen leeyihiin taageerada buuxda ee Dowladda Demak. Ku dhawaad ​​kasta sano, ee geedo magaalada Mumbia ee gargaarka qaybinta dowladda. Tan iyo 2008, Regency Demak bilaabay inuu abaabulo beerista oo biyo ah kaashuuga, kaasoo u dhexeeya gacanta iyo magaalada Mumbia ee horumarinta tayada biyaha, ku dhafeen, horumarinta beeritaan ee aagga, ilaa technology iyo dheddiga ee goostay dalag xilli-ka. Maalgelinta Total ee maamulka iyo horumarinta ee mJOKIBET.COM Agen Casino Online Terpercaya agaalada Mumbia ee biyaha bilowday tan iyo 2008-2012 waa USD 746 632 000.
Diposting oleh Juragan Channel di 02.22